အနုပညာ နဲ့ ပက်သတ်ရင် ရင်နဲ့ အမျှ ခံစားတတ်ကြောင်း ကဗျာလေး ရေးပြီး သက်သေပြ လာတဲ့ ခေးဆက်သွင် – Cele Posts
နာမည်လေးနဲ့ လိုက်အောင် အရမ်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မင်းသမီး ချောလေး ခေးဆက်သွင်ကတော့ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ပီပီ ကျရာ ဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို စိတ်ရောကိုယ်ပါနစ်ပြီး အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်တတ် တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ နာမည်ကြီးသူ တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေးဆက်သွင် ကတော့ ဇာတ်ရုပ်မျိုးစုံကို သရုပ်ဆောင်ပေမယ့် သူမရဲ့ အပြင်လက်တွေ့က ပုံစံကတော့ ရိုးရှင်းပြီး လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ နေထိုင်တတ်သူ တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာနဲ့ ပက်သတ်ရင် အသွေးထဲ အသားထဲကနေ စွဲလန်းစွာလုပ်ကိုင် တတ်တဲ့ ခေးဆက်သွင်က ဒီကနေ့မှာလည်း သူမကိုယ်တိုင် ရင်နဲ့အမျှ ရေးသားထားတဲ့ ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ကို ချပြလာပါတယ်။
ခေးဆက်သွင်ရဲ့ ကဗျာလေးက “ဘယ်တုန်းက မုန်းခဲ့ကြလို့လဲ??? ရင်ခုန်တတ်စမဟုတ်တဲ့ ကိုယ့် အတွက်တော့.. မုန်းတာက ရှုံးတာနဲ့ အတူတူမို့.. ကိုယ် သိပ်အနိုင်လိုချင်မိနေတုန်းပဲ.. ဘယ်တုန်းက ဝေးခဲ့ကြလို့လဲ???? တူတူနားထောင်ဖူးတဲ့ သီချင်းတွေကြားတိုင်း.. အနီးဆုံးကို စိတ်နဲ့အပြေးလာခဲ့ကြတာပဲ.. ရုပ်နဲ့ခန္ဓာ လိုမှမလိုတာ….ဘယ်တုန်းက အထင်သေးမိလို့လဲ??? ပုထုဇဉ်သဘာဝ ပြစ်မှားမိတာလေးတွေနဲ့.. ချစ်သွားကြည့်တာလေးတွေတော့ ရှိမှာပေါ့.. ခပ်ပါးပါး နားလည်နိုင်သေးပါရဲ့.. ဘယ်တုန်းက လမ်းခွဲလို့လဲ??? စလျှောက်ကတည်းက နားလည်မှုနဲ့.. တည်ဆောက်ခဲ့တာမို့.. တစ်လမ်းစီ ဖောက်ဖို့မှ မဟုတ်တာ.. ကြားဖူးတဲ့ အပိုင်းအစလေး ထဲကလို.. နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့နာ နှလုံးသားနဲ့ နာတော်မူပါ🤍 (ရေးမိရေးရာ ကဗျာ😜)” ဆိုပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ခေးဆက်သွင် ကတော့ အနုပညာနဲ့ ပက်သတ်ရင် ရင်နဲ့အမျှ ခံစားတတ်ကြောင်း သူမရဲ့ ကဗျာလေးက သက်သေပါပဲ။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ခေးဆက်သွင်ရဲ့ ကဗျာလေးကိုဖတ်ပြီး ဘယ်လိုခံစားရလဲ ပြောပြခဲ့ကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင် ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။
အနုပညာ နဲ့ ပကျသတျရငျ ရငျနဲ့ အမြှ ခံစားတတျကွောငျး ကဗြာလေး ရေးပွီး သကျသပွေ လာတဲ့ ခေးဆကျသှငျ
နာမညျလေးနဲ့ လိုကျအောငျ အရမျး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ မငျးသမီး ခြောလေး ခေးဆကျသှငျကတော့ သရုပျဆောငျ တဈယောကျပီပီ ကရြာ ဇာတျရုပျတိုငျးကို စိတျရောကိုယျပါနဈပွီး အကောငျးဆုံး သရုပျဆောငျတတျ တာကွောငျ့ ပရိသတျတှကွေားမှာ နာမညျကွီးသူ တဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခေးဆကျသှငျ ကတော့ ဇာတျရုပျမြိုးစုံကို သရုပျဆောငျပမေယျ့ သူမရဲ့ အပွငျလကျတှကေ့ ပုံစံကတော့ ရိုးရှငျးပွီး လှတျလပျပေါ့ပါးစှာ နထေိုငျတတျသူ တဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ အနုပညာနဲ့ ပကျသတျရငျ အသှေးထဲ အသားထဲကနေ စှဲလနျးစှာလုပျကိုငျ တတျတဲ့ ခေးဆကျသှငျက ဒီကနမှေ့ာလညျး သူမကိုယျတိုငျ ရငျနဲ့အမြှ ရေးသားထားတဲ့ ကဗြာလေး တဈပုဒျကို ခပြွလာပါတယျ။
ခေးဆကျသှငျရဲ့ ကဗြာလေးက “ဘယျတုနျးက မုနျးခဲ့ကွလို့လဲ??? ရငျခုနျတတျစမဟုတျတဲ့ ကိုယျ့ အတှကျတော့.. မုနျးတာက ရှုံးတာနဲ့ အတူတူမို့.. ကိုယျ သိပျအနိုငျလိုခငျြမိနတေုနျးပဲ.. ဘယျတုနျးက ဝေးခဲ့ကွလို့လဲ???? တူတူနားထောငျဖူးတဲ့ သီခငျြးတှကွေားတိုငျး.. အနီးဆုံးကို စိတျနဲ့အပွေးလာခဲ့ကွတာပဲ.. ရုပျနဲ့ခန်ဓာ လိုမှမလိုတာ….ဘယျတုနျးက အထငျသေးမိလို့လဲ??? ပုထုဇဉျသဘာဝ ပွဈမှားမိတာလေးတှနေဲ့.. ခဈြသှားကွညျ့တာလေးတှတေော့ ရှိမှာပေါ့.. ခပျပါးပါး နားလညျနိုငျသေးပါရဲ့.. ဘယျတုနျးက လမျးခှဲလို့လဲ??? စလြှောကျကတညျးက နားလညျမှုနဲ့.. တညျဆောကျခဲ့တာမို့.. တဈလမျးစီ ဖောကျဖို့မှ မဟုတျတာ.. ကွားဖူးတဲ့ အပိုငျးအစလေး ထဲကလို.. နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့နာ နှလုံးသားနဲ့ နာတျောမူပါ🤍 (ရေးမိရေးရာ ကဗြာ😜)” ဆိုပွီး ဖွဈပါတယျ။
ခေးဆကျသှငျ ကတော့ အနုပညာနဲ့ ပကျသတျရငျ ရငျနဲ့အမြှ ခံစားတတျကွောငျး သူမရဲ့ ကဗြာလေးက သကျသပေါပဲ။ ပရိသတျကွီးလညျး ခေးဆကျသှငျရဲ့ ကဗြာလေးကိုဖတျပွီး ဘယျလိုခံစားရလဲ ပွောပွခဲ့ကွပါဦးနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျ ကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျ။